Mompera Lorenzo Scarfone
Teraka tamin'ny 19 Jolay 1932 i mompera Lorenzo SCARFONE ary natao Batemy tao Scilla any amin'ny faritra Calabria any Italia. Tao amin’ny Bazilikan’i Md Joany ao Latran (Roma) no nandraisany ny sakramentan'ny fankaherezana.
Don Bosco, Ray sy Mpampianatra
Tamin'ny Alahady 26 Janoary lasa teo no nankalazana ny fetin'ny Don Bosco tany Toamasina. Satria mbola tsy manana trano fivavahana isaky ny alahady ny any an-toerana dia teo an-tokotany no nanatanterahina izany.
« Afon-dasy » ho an'ny fiadanana
Zary lasa fomba fanao ao amin’ny Oratorio nanomboka ny taona 2010 ny afon-dasy.
Naseho ny : 1 janoary 2020
« …Indro hafaliana lehibe no ambarako aminareo » Lk 2,10. Arahabaina nahavita soa ny Noely ary mirary soa anareo rehetra amin’izao taona vaovao 2020.
Pejy 4 amin'ny 5